Sibonelela ngenkxaso iyonke kwaye uya konwaba xa usazi ukuba siyayithanda.
Ngoyilo kunye neqela le-R & D labantu abamalunga nama-50, uFunlandia ubeka iimveliso phambili kwaye avelise phantse iintlobo ezili-1 000 zeeprojekthi zokuzonwabisa kuyo yonke iminyaka ukusuka kwi-100 ukuya kwi-10,000㎡.
Sisekele inkqubo yoqeqesho yobungcali, eqolileyo nenenkqubo yokunceda abathengi ukuba baqeqeshe abasebenzi babo abaphambili ukuba bafumane umsebenzi ngokukhawuleza. Sikwaqinisekisa ukuba amaqela ethu okusebenza kwabathengi anezakhono zokusebenza ezifanelekileyo kwaye banokusebenza ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Ngokusekwe kwiimpawu zeshishini labathengi bethu, senza izicwangciso ezichanekileyo zeshishini kunye nemigaqo yokusetyenziswa komthengi ngamnye, ukubonelela ngeenkonzo zentengiso kwi-Intanethi kunye nokwazisa ngempembelelo yeeprojekthi zabaxumi bethu ezisandula ukuvulwa kwindawo yengingqi, evumela abathengi bethu ukuba qala ishishini, ufumane abathengi abatsha kwaye ugcine abantu abadala.
Kule minyaka ili-15 idlulileyo, sisebenzise iiprojekthi ezingaphezu kwe-1000, sifikelela kwizigidi ezingama-20 zeentsapho ezonwabileyo kumazwekazi amathandathu kwihlabathi liphela. Kwangelo xesha, kudityaniswe nenkqubo emiselweyo yolawulo kunye neqela elinabantu abangama-200, sinikezela abathengi bethu ngeendlela ezingama-35 ezisebenzayo zegolide ukubanceda ukuba bandise izibonelelo zabo.
Ilungelo lokushicilela 2010-2021 funlandia.com Onke amalungelo agciniwe. Imveliso eshushuImephu yendawoAbaenzi Bendawo Yokudlala, Iindleko zokudlala ngaphakathi kwiNdawo yokuDlala, Indawo yokudlala ngaphakathi yezixhobo zokudlala, Dlala izixhobo zabantwana abasabhadazayo, Ukwenziwa kweTrampoline Park, IBig Air Trampoline Park Franchise,